Professor Asafa Jaalataa (Yuniveersitii Tenessii irraa)
Dargagoota Oromoo Waldaa Dargaggoota Oromiyaa Minnesota keessatti ijramtaniif kan hin ijaramin, har’a as kan jirtan Waaqayyo ija irraa isin haa hambisu! Guddadhaa mul’adhaa. Sochi barattoota Oromoo Oromiyaa keessaa karaa dandeesan hundaan gargaruun dirqama keessan. Waldaa keessan asitti cimsaa waldaan dargaggoota Oromoo adunyaa akka ijaartaniif waamicha isiniif godha.
Previous articleRSWO – Eebila 26,2018: ODUU fi QOPHII DANBALII KEESSUMMAA
Next articleQabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kudhasadaffaa
ko April 28, 2018 At 12:39 pm
Alert to all:
Lencho leta order to dismantle oromo military force
Abiy Ahmed tells foreign based activists to go back….